ဘေးကင်းလုံခြုံကင်မရာ - ဓာတ်ပုံလျှို့ဝှက်ကုဒ် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဓါတ်ပုံပညာ Apps ကပ » ဘေးကင်းလုံခြုံကင်မရာ - ဓာတ်ပုံ Encryption
ဘေးကင်းလုံခြုံကင်မရာ - ဓာတ်ပုံလျှို့ဝှက်ကုဒ် APK ကို
SafeCamera သူတို့သည်လုံခြုံစွာသေချာဖို့ယင်ကောင်အပေါ်သင်၏ဓါတ်ပုံများ encrypt လုပ်စစ်တပ်ကတန်း encryption ကို (AES 256) အသုံးပြုတဲ့ကင်မရာကိုလျှောက်လွှာဖြစ်ပါသည်, လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားနဲ့ဝှက်ထားသောတတိယပါတီကျူးကျော်ဆန့်ကျင်, သင်သည်သင်၏ device ကိုဆုံးရှုံးလျှင်ပင်နှင့်ကလက်၌ရရှိသွားတဲ့နေကြတယ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဟက်ကာများ။ သငျသညျလွဲပြီးဘယ်သူအားမျှမကသူတို့ကိုရယူနိုင်အောင်လုံလုံခြုံခြုံ, သင်၏ဓါတ်ပုံများဖုံးကွယ်။ SafeCamera အဆိုပါ photos.Key အင်္ဂါရပ်များ 100% လုံခြုံသိုလှောင်မှုသေချာကြောင်း၏ကိုယ်ပိုင်ကင်မရာ module တစ်ခုရှိပါတယ်:
encrypt လုပ်ထားတဲ့ယင်ကောင်အပေါ်ချက်ချင်းဖြစ်နှင့်သင် SafeCamera သင့်ရဲ့မာစတာစကားဝှက်ပေးနှင့်အတူကဖွင့်လှစ်သည်အထိ, အရှင်မဆိုလျှောက်လွှာသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှမြင်ရမည်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုဓာတ်ပုံများယူပါ။
စာဝှက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံများ browse ပြခန်း
မိမိကိုယ်ကိုရိုက်ချက်များတာကို flash နဲ့ timer နေရာမှာနှင့်အတူကင်မရာ
ထို့အပြင် SafeCamera encrypting မှသွင်းကုန်တည်ဆဲဓါတ်ပုံ / files တွေကို filename နှင့်မူရင်းဖိုင်တွေကိုပယ်ဖျက်
ဝေမျှမယ်တူညီတဲ့စကားဝှက်ကိုနဲ့ encrypt encrypt လုပ်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုအီအခြားစကားဝှက်သို့မဟုတ်စာဝှက်ဖြည်ထားတဲ့
အခြားအ SafeCamera ဥပမာအားဖြင့်မှတင်သွင်း encrypt လုပ်ထားဖိုငျမြား
အစိုးရမဟုတ်သောနှင့်စစ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများကလုံခြုံ 100% ဖြစ်သက်သေပြလျက်ရှိသည်သောအနုပညာ algorithms များနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအစီအစဉ်များ၏ပြည်နယ်နှင့်အတူ encryption ။
ကျနော်တို့အရာရာစဉ်းစားပြီတကား သင်သည်မည်သည့်အချက်အလက်ကိုအဆိုပါမှတ်ဉာဏ်သို့စာဖြင့်ရေးသားပြီးတော့အခြားဖိုင်နှင့်အတူအစားထိုးလိုကျသောပင်ဖျက်ပစ်သို့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်တခါ, အဲဒါကို restore လုပ်ဖို့နေဆဲဖြစ်နိုင်သောကြောင်းကိုငါသိ၏ခဲ့သလား SafeCamera ဖုန်းရဲ့ SD ကဒ်ထဲသို့သင့်ရဲ့ encrypt မလုပ်ထားသည့်ဓာတ်ပုံများရေးသားခဲ့သည်ဘူး။ ဓာတ်ပုံကခေါ်ဆောင်သွားသည်ကိုသာထို့နောက်သင့် SD ကဒ်မှတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားညာဘက်ပြီးနောက်ယင်ကောင်အပေါ် encrypted ဖြစ်ပါတယ်။
သင်လုံခြုံစောင့်ရှောက်ချင်ပါတယ်ဖိုင်တွေကိုရှိပါသလား? ကိုယ့်ကို Safe ကင်မရာရဲ့ဒိုမိန်းသို့သူတို့ကိုငါတင်သွင်းကြပြီးအန္တရာယ်ကင်းပါလိမ့်မည်။ SafeCamera ဓာတ်ပုံများကိုင်တွယ်ဘို့အဓိကအားဖြစ်သော်လည်းသင်သည်မည်သည့်အခြားဖိုင်အမျိုးအစားများကိုလည်းတင်သွင်းခြင်းနှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာထိန်းထားနိုင်တယ်။
တစ်စုံတစ်ဦးကအတူစာဝှက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုဝေမျှလိုပါသလား? သင့်လက်ရှိစကားဝှက်ကိုနဲ့ encrypt တစ်ခုသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောစကားဝှက်ကိုအတူ Re-encrypted ဖြစ်စေဓာတ်ပုံ (s) ကိုပေးပို့ပါ။ ထို့နောက်ရုံသင်၏အဆွေခင်ပွန်းဖို့ encryption ကိုစကားဝှက်ကိုပြောပြခြင်းနှင့်သူ / သူမ SafeCamera ၏သူ / သူမ၏မိတ္တူသို့တင်သွင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။
SafeCamera ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ဖိုင်တွေစောင့်ရှောက်ခြင်းအဘို့အ NSA ကအတည်ပြုသော AES 256 bit နဲ့စာဝှက်စနစ်, အသုံးပြုသည်။ SafeCamera2ကြားမှာထက်ပိုသုံးပြီး PBKDF # 2000 algorithm ကိုသုံးပြီးစာဝှက် / စာဝှက်ဖြည် key ကိုတထစ်ချ။
တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် http://www.safecamera.org/ အပေါ်အသေးစိတ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုကြည့်ပါ
desktop version ကို http://www.safecamera.org/desktop မှာထွက်ဖြစ်ပါတယ်
WRITE_EXTERNAL_STORAGE - SD ကဒ်ကနေ encrypted နှင့် / သို့မဟုတ်လွင်ပြင်ဖိုင်များကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းများအတွက်
ကင်မရာ - ဓါတ်ပုံရိုက်ယူသည်
WAKE_LOCK - တာရှည်စစ်ဆင်ရေးလုပ်စဉ်အပေါ်မျက်နှာပြင်ကိုစောင့်ရှောက်သည်
support@safecamera.org မှမဆိုအားနည်းချက်များကိုသတင်းပို့ ကျေးဇူးပြု.
* ပြခန်းအတွက် Folders ယခုအက္ခရာစဉ်ခွဲခြားပေးသည်
* GIF ကိုထောက်ခံကြောင်း, ယခုသင်ပြခန်းသို့ကာတွန်း GIF များတင်သွင်းကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်
* Added ကင်မရာရှပ်တာအသံက (ဦးစားပေးအနေဖြင့် Control)
ဖိုင်တွေကိုကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏနှင့်အတူဖိုလ်ဒါများအတွက် * ပြခန်းဝန်မြန်နှုန်းတက်
ဘေးကင်းလုံခြုံကင်မရာ - ဓာတ်ပုံ Encryption
1.82 ကို MB